Iifonti ezintle kakhulu ze-calligraphy ekufuneka uzazi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umnxeba obhaliweyo ilahlekile kule minyaka idlulileyo kwaye oku kungenxa yokuba zombini iibhodi zezitshixo ezibonakalayo kunye nezibonakalayo ziye zafezekisa ukuba phantse sinepensile nephepha njengezinto zomqokeleli phantse. Mhlawumbi kuyenzeka kum, kodwa uluntu ngokubanzi lushiya ngasemva loo minyaka apho umntu kufuneka abhale khona kwaye le ndlela yonxibelelwano ibalulekile kwizinto ezininzi kubomi bethu.
Ukuba kwilizwe lobuchwepheshe, ukusetyenziswa kweefonti kuyasinceda linganisa loo calligraphy ukhetheke kwaye unike umsebenzi wethu ngokwahlula ukuqaqambisa injongo ethile. Ngesi sizathu, ezi fonti zecalligraphy zintle nje zikumgangatho omkhulu abazixabisileyo kwaye zonke zicetyiswa kakhulu.
3 Umnxeba kaLucida
4 INkosi yekhefu
5 ILamar Pen
6 Dom Uthanda uMariya
Ngesitayile esihle, ifonti ye-Allura calligraphy yenye yezona zilungileyo Zonke iintlobo zeeprojekthi zedijithali kwaye iprintiwe, enokubandakanya iiposta, uyilo lwelogo okanye nasiphi na isizathu esifuna unobumba okhethekileyo.
Le fonti inokuchukumisa kancinci kancinciKodwa oku akuthethi ukuba akabuthinteli ubuhle, kodwa endaweni yoko ububamba ngenye indlela. Yenziwe nguLaura Condouris, yifonti yokwenyani enomtsalane wendalo omangalisayo.
Sishiya intabalala kuloo calligraphy kwaye siye kwesinye sinendlela yaso. Yenye yeefonti ozithandayo kubayili abaninzi kwaye isebenza ngokugqibeleleyo kwiincwadi, iingxelo kunye nazo zonke iintlobo zeenjongo.
Omnye ifonti yasimahla I-calligraphy esibuyisela ubulula kunye nesizathu sendalo sokuyisebenzisa. UClement Nicolle ungumdali kwaye uzisa isitayile esihle kuye. Ikhutshelwe ngaphezulu kwamaxesha ezigidi ezi-2 namhlanje.
Ifonti entle ene Ukuchukumisa i-retro ngamanye amaxesha kubonakala ngathi ayifundeki kwaye ibonisa ubuntu obukhulu. Ungaya kwezinye iinkulungwane ngale calligraphy yemisebenzi ethile.
Dom Uthanda uMariya
Sigqiba ngale fonti esebenzisa oonobumba ababonakala ngathi abanasiphelo kumaqhina ababangqongileyo. Enye yezona zintle kakhulu Iifonti zecalligraphy.
Sishiya ezinye iifonti ezingama-25 zecalligraphy.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti ezi-6 ezinomdla zokubhala ngobuhle bazo kwisitayile